Ho an’ireo Iraniana Sasany Manaraka Ny Fifidianana Amerikana, Toa Tahaka Ny “House of Cards” Tokoa ny Demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2016 6:21 GMT
Sariitatra avy amin'i Mana Neyestani ho an'ny IranWire.
Manana marika ratsy laza: “Diso Dokafana loatra ny Demokrasia” i Frank Underwood, mpilalao fototra ao amin'ny andian-tantara malazan'ny Netflix TV “House of Cards“. Lasa ohatra mampihetsi-po ho an'ny Iraniana manaraka ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana tamin'ity taona ity ilay tsongan-teny diso tononina ity, indrindra hatramin'ny nivoahan'ny fandaharana tao Iran, mampahatsiahy azy ireo ny tolona ho amin'ny demokrasia teo amin'ny tontolo ara-politikan'izy ireo manokana.
Maro ireo niantso ny adihevitra faharoa teo amin'i Donald Trump sy Hilary Clinton ho ratsy indrindra teo amin'ny tantara Amerikana. Nanjakazaka loatra tamin'ity fifidianana ity ny tantara ratsy sy ny fanevatevana ka maro no manahy azy ho lasa fenitra vaovao. Ho an'ireo Iraniana niaina ny fe-potoam-piasana indroa misesy tamin'ny fitondrana mpandrendri-bahoakan'i Mahmood Ahmadinejad (2005-2013), nampahatsiahy zavatra toa efa nitranga ny fifidianana Amerikana. Ary satria efa niaina ny fihetsiketsehana Maitso manohitra ny naha-lany indray an'i Ahmadinejad tamin'ny 2009 sy ny famoretan'ny governemanta taorian'izany ny Iraniana, dia manantena fotsiny fa tsy “diso dokafana loatra” araka ny nolazain'i Underwood ny demokrasia Amerikana.
Vao haingana ny Mpitarika Faratampon'i Iran, ny Ayatollah Ali Khamenei no nampahafantatra ny fankasitrahany ny fomba “firesaka mahitsy” an'i Trump, toetra nananan'i Ahmadinejad ihany koa. Efa naneho ny ahiahiny mikasika ny fitondran'i Trump sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fifampiraharahana ara-nokleary ao Iran anefa i Khamenei teo aloha, ka niteraka adihevitra tao amin'ny media sosialy Iraniana ny fiovam-pony, mampitovy ny fihetsika tamin'ny fanohanan'i Khamenei an'i Ahmadinejad nandritra sy taorian'ny fifidianana 2009 .
“Zara raha nahazo fitantarana tamin'ny fahitalavitra tao Iran i Trump raha nilaza izy fa nisy hosoka ny fifidianana. Rehefa naneho fanohanana azy anefa i Khamanei, dia lasa Ahmadinejad vaovao i Trump. Niseho manerana ny fahitalavi-pirenena izy.”
Na dia talohan'ny nanambaran'i Khamanei ny fanohanany an'i Trump aza, dia efa nankafy ilay fampisehoana amin'ny politika Amerikana ny vondron'olona eo amin'ny fitondrana. Nalefa mivantana ny adihevitra filoham-pirenena, ary nalefa ihany koa ny fizarana voalohany amin'ny fandaharana Netflix “House of Cards”.
Satria miomana hifidy i Amerika ny Talata, tsara ny mandinika lohahevitra vitsivitsy noresahan'i Ahmadinejad sy Trump, ary resaka fandrendreham-bahoaka tahaka ny ahoana no tafiditra amin'ny demokrasia Amerikana.
Fanalam-baraka ny Mpanohitra
Tamin'ny fampielezan-kevitra filoham-pirenena tamin'ny 2009, nirotsaka hofidiana fanindroany i Ahmadinejad. Niverina nanao politika ny mpifanandrina lehibe aminy, Mir Hossein Mousavi, taorian'ny taompolo vitsy nisintahana. Nilaza i Mousavi fa nifaninana tamin'ny fifidianana izy hiadiana amin'ny kolikoly misy foana sy ny politika mirediredy noheveriny fa nanjaka tao amin'ny firenena. Ho setrin'izany, ankoatra ireo hetsika hafa, niseho tao amin'ny fahitalavi-pirenena i Ahmadinejad mitondra antontan-taratasy matevina izay hita miharihary fa ahitana firaketana ny kolikoly miely patrana nataon'ireo manampahefana maromaro nolazainy fa mpanohana an'i Mousavi.
Nandroso haingana ny fito taona, imbetsaka niantso ny anaran'ireo namana Repoblikana mpifaninana toy ny “Marco kely” sy “Fiorina ratsy tarehy” i Trump, ary mazava ho azy, “Hillary maditra”, izay lasa tenirohy malaza teo amin'i Trump sy ny mpanohana azy. Na dia ratsy laza tamin'ny resa-pakony aza i Ahmadinejad, ny vao haingana indrindra notevatevainy dia ny toe-batan'ny mpifaninana aminy raha niantso ireo mpanao fihetsiketsehana Maintso ho “vovoka sy fako mivangongo” izy.
Teny Tsara Lahatra Anti-Semitika
Lasa nalaza i Ahmadinejad tamin'ny fandavàny ny fisian'ny Fandevonana (jiosy) sy ny fanamarihana goavana fa “tokony hofafàna ao anaty sarintany i Isiraely“. Tamin'ny faha-60 taonan'ny firenena Isiraely, nilaza i Ahmadinejad fa “tena diso ireo izay mieritreritra fa afaka mamelona indray ny faty maimbon'ny fitondrana hosoka Isiraeliana amin'ny alalan'ny fanaovana tsingerin-taona” izy ireo. Tamin'ny fanambarana mirehidrehitra hafa, nandà hatrany ny fisian'ny Fandevonana izy, nahatonga azy nahazo marika avy amin'ireo mpanao politika sy media tandrefana hoe mpandà fisian'ny Fandevonana sy “Hitler vaovao” mihitsy aza.
Misy ny marika manify izay hiha-manify eo amin'ny laingan'i Trump sy ny fandavan'i Ahmadinejad ny Fandevonana. Tena ratsy izany.
Folo taona miampy fotoana vitsy tatỳ aoriana, nahasanganehana ny fanehoan-kevitr'ilay Repoblikana natolotra hofidiana filoham-pirenena mitsaratsara an-tendrony ny Jiosy sy manambatra ny endrik'i Hillary Clinton amin'ny Kintan'i David sy antontam-bola. Niteraka fipoahan'ny fanevatevana antisemitika sy fanafihana ireo Jiosy mpamoaka vaovao nitsikera ny fanentanan'i Trump izany fihetsika izany – fanafihana tsy mba nomelohin'ny fanentanan'i Trump tsotra izao akory. Mifanohitra amin'izany, imbetsaka namerina nandefa sioka fiamboniana fotsy hoditra ny kaonty Twitter-n'i Trump, manampy amin'ny fampielezana bebe kokoa ny fankahalana Semita. Namaly tamin'ny alalan'ny famoahana fanambarana manameloka ny fanavakavaham-bolonkoditra sy fankahalana vahiny ny fikambananan'ny fiarahamonina Jiosy. Tsy dia nisy fiantraikany izany, na izany aza, ary volana vitsivitsy tatỳ aoriana, nanjary mariky ny nasionalista fotsy farany ankavanana i Pepe ilay Sahona ary nataon'ny Ligin'ny Anti-Fanalambaraka marika ofisialin'ny fankahalana. Naneho hevitra miaraka amin'ny tenirohy #WeveSeenThisBefore (efa nahita izany isika) ny vahoaka, fampahatsiahivana fa mampiako ny fandrendreham-bahoaka taloha ny teny tsara lahatr'i Trump.
Fanavakavahana sy Fanabantiana Vehivavy
Nandritra ny fe-potoam-piasana roa, tsy nitsahatra nanolotra politika jerena ho tsy tia vehivavy i Ahmadinejad. Tamin'izy voafidy, novain'ny filoha Ahmadinejad ny anaran’ny Foibe Fandraisana Anjaran'ny Vehivavy ho lasa Foibe Raharaha misahana ny Vehivavy sy ny Fianakaviana. Fotoana fohy taty aoriana, nomena baiko ireo vehivavy mpiasa ao amin'ny governemanta hiasa mandritra ny andro mazava ihany. Nandroso lalàna mampihena ny ora fiasàn'ny vehivavy voafidy i Ahmadinejad. Noraisina ho fanasongadinana ny andraikitry ny vehivavy ho mpikarakara tokantrano sy renim-pianakaviana izany tolo-kevitra izany. Ankoatra ny politika anatiny, nanao fanamarihana esoeso momba ny mety ho fanendrena filoham-fanendrena an'i Hillary Clinton tamin'ny 2008 i Ahmadinejad, nilaza fa “sarotra ny hisian'ny fiadidian'ny vehivavy ao amin'ny firenena mirehareha amin'ny fitaovam-piadiany.”
Fantatra amin'ny fampijaliana vehivavy am-polo taonany i Donald Trump, fara fahakeliny nanomboka tamin'ny taona 1980. Ara-tantara, voatsikera noho ny politikany momba ny zon'ny vehivavy hanan'anaka ny antoko Repoblikana, saingy nitondra ny lazan'ny antoko tamin'ny sehatra vaovao tanteraka ny fanambaniana vehivavy sahisahy loatra ataon'i Trump.
Ary mitohy ny lisitra. Na i Trump na i Ahmadinejad dia samy nandray fepetra mampiadihevitra momba ny fifindra-monina, ny vondrona mpampihorohoro any Afovoany Atsinanana, ny firaisan'ny samy lehilahy, eny fa na dia ny fangala-tahaka nataon'ny ekipan'izy ireo aza. Ho an'ny mpanohana azy ireo, anefa, manao antso mipoapoaka izy ireo, amin'ny fiampangana ireo lazaina fa “sangany” sy ireo vondron'olona mahazo fahefana mpanao kolikoly ao amin'ny firenena misy azy ireo.
Nametraka an'i Iran ho ao anatin'ny fiakaram-bidim-piainana sy taha avon'ny tsy fananan'asa manan-tantara ny fiadidian'i Ahmadinejad, nikorontana ny fifandraisana any ivelany, very vokatry ny sazy ara-toekarena ny miliara dolara maro, ary nitsingidina avy amin'ny laharana faha-88 tamin'ny 2005 nankany amin'ny laharana faha-144 tamin'ny 2013 ny filaharana eo amin'ny Tondro Ara-Kolikoly, raha tsy hitanisa afa-tsy vitsivitsy fotsiny.
Na dia tsy midika ho fampitahana feno ny toe-java-misy amin'ny toekarena sy ny rafi-pifidianana ao Iran sy ao Etazonia anefa izany, dia saika azo antoka fa mety hiteraka fandrahonana lehibe ho an'ny demokrasia Amerikana ny fandrendreham-bahoaka izay nanamaloka ny fanentanana fifidianana filoham-pirenena Amerikana 2016, tahaka ny tao Iran nandritra ny tetezamita marefo ho amin'ny fanovana sy ny demokrasia. Ny fihemorana sy ny fitotonganan'ny toe-karena no farafahakeliny mampiahiahy ny olom-pirenena. Angamba maneho tsara ny vokatra mety hiseho ireto fandravahana an-tsary ato amin'ny rohy ireto, izay antenaina fa ahafahan'ny mpifidy mandinika alohan'ny handehanana any amin'ny biraom-pifidianana [rahampitso].